Platzi: နည်းပညာနှင့် ပတ်သက်၍ လေ့လာရန်အဓိပ္ပါယ်ရှိသောပလက်ဖောင်း (My Experience) | Linux မှ
Platzi: နည်းပညာနှင့် ပတ်သက်၍ လေ့လာရန်အဓိပ္ပါယ်ရှိသောပလက်ဖောင်း (My Experience)
Luigys toro | | အသားပေး, GNU / Linux များ, ပရိုဂရမ်းမင်း, အကြံပြုပါသည်
စဉ်ဆက်မပြတ်သင်ယူခြင်းသည်လူသားတို့အတွက်အရေးကြီးဆုံးဖြစ်စဉ်ဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်စဉ်းစားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်မွေးဖွားချိန် မှစ၍ သေသည်အထိသင်ယူသည် နေ့စဉ်အသစ်တစ်ခုကိုသင်ယူရန်ကြိုးစားခြင်းသည်ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာတာဝန်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ယနေ့အချိန်တွင်မည်သည့်areaရိယာတွင်မဆိုပညာရေးကိုလက်လှမ်းမီမှုကိုဒီမိုကရေစီစနစ်ဖြင့်ကျင့်သုံးပြီးတက္ကသိုလ်၊ တက္ကသိုလ်များနှင့်ပညာရှင်များသည်အသိအမှတ်ပြုရေးယန္တရားများဖြစ်လာကြပြီး၊ အခြားသူများကိုစနစ်တကျ၊ နည်းစနစ်ကျ။ ကောင်းစွာအခြေပြုထားသည့်ပုံစံဖြင့်ပြုလုပ်သည်။
ဤအရာအလုံးစုံမျိုးစုံ၏ဖန်တီးမှုမှ ဦး ဆောင်လျက်ရှိသည် သင်ယူမှုအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ပလက်ဖောင်း၎င်းတို့ထဲမှအချို့သည်အခမဲ့၊ အခမဲ့၊ သီးသန့်၊ အခကြေးငွေဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ မျိုးစပ်လွယ်သော်လည်းတစ် ဦး စီတွင်ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးများရှိသည်။ လူအများအပြားတို့သည်ကုန်သွယ်ရေး၊ အလုပ်အကိုင်သို့မဟုတ် ၀ ယ်လိုအားအလွန်မြင့်မားသောဒေသတွင်အထူးပြုရန်လူအများကိုပိုမိုလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးရန်ခွင့်ပြုသည်။ ။ ငါပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ, ဒီပလက်ဖောင်းအများအပြားတွင်ပါဝင်ခဲ့ပါပြီ, သူတို့ထဲကတစ် ဦး ချင်းစီငါ့ကိုအသိပညာအမျိုးမျိုးပေးတော်မူပြီ, ဒါပေမယ့်မှားယွင်းနေ၏ကြောက်လန့်ခြင်းမရှိဘဲ, Platzi ငါ့အလုပ်လုပ်ကိုင်ဘဝအတွက်အများဆုံးအထောက်အကူပြုသောတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်။
2 Platzi နှင့်အတူ Linux ကိုဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူပြီးလက်မှတ်ရ?
4 Platzi လူမျိုးများကိုသိခြင်းလား။
5 Platzi တွင်တစ်လလေ့လာရန်ပညာသင်ဆုကိုအနိုင်ရရှိပါ
Platzi တစ် ဦး ဖြစ်ပါတယ် အွန်လိုင်းပညာရေးပလက်ဖောင်း ကျွန်ုပ်သည်အလွန်ပျော်စရာကောင်းသော၊ လက်တွေ့ကျပြီးပရော်ဖက်ရှင်နယ်အဖြစ်သတ်မှတ်သည်။ ၄ င်းသည်ကျောင်းသားများကို ၄ င်းတို့၏လစာ၊ အလုပ်အကိုင်နှင့် ၄ င်းတို့၏ကုမ္ပဏီများတိုးတက်ရန်သို့မဟုတ်ဖန်တီးရန်စွမ်းရည်များနှင့် ပတ်သက်၍ သိသာသောတိုးတက်မှုများရရှိရန်ကူညီပေးရန်အာရုံစိုက်သောကျောင်းသားဖြစ်သည်။
Platzi သည်အဓိကအားဖြင့်နည်းပညာနှင့်သက်ဆိုင်သည့်ပညာရေးကိုလှည့်ပတ်သည် ပရိုဂရမ်နှင့်ဆက်နွယ်မှုမရှိသော်လည်း၊ ၎င်းသည်မိမိကိုယ်ကိုလုံလောက်သောပုံရိပ်ဖန်တီးခြင်းမှကျွန်ုပ်တို့၏အိပ်မက်အကောင်အထည်ဖော်မှုကိုဖန်တီးရန်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏အတွေးအခေါ်များကိုဘဝကိုပေးစွမ်းရန်လိုအပ်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်များကိုလေ့လာခြင်းအားဖြင့်သင်ယူရန်ခွင့်ပြုမည့်အလုပ်အကိုင်နှင့်သင်တန်းများကိုအုပ်စုဖွဲ့သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီများသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များကိုတီထွင်ခြင်း၊ ဒီဇိုင်းဆွဲခြင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့၏စျေးကွက်ရှာဖွေခြင်းများသို့မဟုတ်ပရိုဂရမ်းမင်းပြုလုပ်စဉ်ကမှော်သို့မဟုတ်အခြားတစ်နည်းပြောရလျှင်ကျွန်ုပ်တို့ပျော်မွေ့ရန်ရိုးရှင်းစွာကူညီခြင်း။
ဒီပလက်ဖောင်းရှိတယ် သင်တန်း ၁၀၀ ကျော်နှင့်အလုပ်အကိုင် ၂၄ ခုကျော်ရှိသည်, ကျောင်းသားများ ၁၀၀,၀၀၀ ကျော်သည်အခြားသူများအနေဖြင့်ဝက်ဘ်နှင့်အက်ပလီကေးရှင်းများ၊ အွန်လိုင်းစျေးကွက်ရှာဖွေခြင်း၊စက်မှုလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်သူများကသင်ကြားပေးသည့် Live and Recorded Class များဖြင့်သင်ယူမှုကိုဖြည့်ဆည်းပေးသောမျှတသောတက်ကြွသောအသိုင်းအဝိုင်းတစ်ခု၏ပတ် ၀ န်းကျင်ကိုအသုံးပြုသောသူ။
Platzi ၏အောင်မြင်မှုကိုသံသယရှိစရာမလိုဘဲ၊ ကျောင်းသားများအားအများပြည်သူအားဆွဲဆောင်မှု ရှိ၍ အသုံး ၀ င်သည့်အကြောင်းအရာများ၊ ရိုးရှင်း။ ဖျော်ဖြေရေးသင်ကြားမှုယန္တရားများဖြင့်သင်ကြားပေးခြင်းနှင့်အတူကျောင်းသားများအားစွမ်းရည်မြှင့်တင်ရန်စွမ်းရည်ဖြစ်သည်။ အလားတူပင်ပလက်ဖောင်း ၇၀% ထက်ပိုသောသင်တန်းပြီးဆုံးသည်။ဆိုလိုသည်မှာ Platzi တွင်ပညာသင်ဝံ့သောလူများ၊ အများစုမှာအဆိုပြုထားသောသင်တန်းများပြီးဆုံးသွားသည်အခြားနည်းလမ်းများစွာရှိသောလူ့အဖွဲ့အစည်းတွင်အရေးကြီးဆုံးအရာတစ်ခုမှာရည်ရွယ်ချက်များကိုသတ်မှတ်ရန်ခက်ခဲသည်။
Platzi နှင့်အတူ Linux ကိုဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူပြီးလက်မှတ်ရ?
ပလက်တီဇကိုစလုပ်တုန်းကငါလုပ်ခဲ့တာကဖျော်ဖြေရေးပဲ Linux ဆာဗာစီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်း၎င်းတို့သည်ကျွန်ုပ်တို့အား Linux တွင်ဆာဗာများပေါ်တွင်အသုံးပြုသင့်သည့်အကြောင်းပြချက်ကောင်းများပေးသည်။ ကန ဦး သတ်မှတ်ခြင်း၊ ပရိုဂရမ်ဖွဲ့စည်းမှု၊ အခန်းကန့်နှင့် boot စီမံခန့်ခွဲခြင်း၊ ဆာဗာကိုစနစ်တကျစီမံရန်ကွဲပြားခြားနားသောလုပ်ဆောင်မှုများစသည့်အခြေခံနှင့်အဆင့်မြင့် configurations များကိုပြုလုပ်ရန်သင်ကြားပေးသည်။ အဆင့်မြင့် Linux လုံခြုံရေးပညာပေးခြင်း၊
ဒီသင်ခန်းစာကိုစိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းသည့်ရင်းမြစ်များဖြင့်ဖြည့်စွက်ထားသောဗီဒီယိုများစွာဖြင့်ခွဲထားသည်။ သင်ခန်းစာများတစ်လျှောက်တွင်ကျောင်းသားများကျော်လွှားရမည့်စိန်ခေါ်မှုများနှင့်ရရှိသောဗဟုသုတကိုအတည်ပြုရန်ဖြစ်သည်။
သင်တန်း၏အဆုံးတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အသိပညာဗဟုသုတနှင့် Platzi ၏ပံ့ပိုးမှုများကိုအာမခံပေးမည့်အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ကိုယူနိုင်သည်။
ဤသင်တန်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘရောက်ဇာမှအချက်ပြမှုတစ်ခုကိုအသေးစိတ်ရှင်းပြခြင်းကဲ့သို့သောရိုးရှင်းသောဥပမာများနှင့်အသေးစိတ်ရှင်းလင်းချက်များဖြင့်စတင်သည်။ သို့သော်၎င်းကိုမည်သို့ဖြစ်ပျက်စေမည်ကိုစိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းသည့်နည်းဖြင့်စတင်သည်။ ထို့နောက်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားလုပ်ဆောင်နိုင်မှုများနှင့်အခြေခံပရိုဂရမ်းမင်းအမိန့်များကိုလှည့်လည်ကြည့်ရှုပြီးနောက်ကျွန်ုပ်တို့ဝင်ပါ အခြားအရာများအပြင်အခြားဂြိုဟ်ပေါ်ရှိကျွန်ုပ်တို့၏အလေးချိန်ကိုတွက်ချက်ရန် (၎င်းတို့တစ်ခုချင်းစီ၏မြေထုဆွဲအားအခြေအနေများအရ)၊ ကီးဘုတ်မြှားဖြင့် Canvas ပေါ်တွင်ဆွဲခြင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်ဗီဒီယိုဂိမ်းအတွက်အခြေခံဖန်တီးခြင်း၊ ဘုံပြproblemsနာများကိုတွက်ချက်ရန်ခွင့်ပြုမည့်ပရိုဂရမ်စီမံကိန်းခြောက်ခုကိုဖြေရှင်းပါ နာမည်ကြီးသည့် fizzbuzz ကဲ့သို့ ATM စက်တစ်ခုသို့မဟုတ်အဆင့်မြင့် client server application တစ်ခုပြုလုပ်ခြင်းကိုနှစ်သက်သည်။
သင်သည် Platzi အခြေခံပရိုဂရမ်သင်တန်းနှင့်ပရိုဂရမ်ပြုလုပ်ခြင်းကိုသင်မလေ့လာပါကပရိုဂရမ်လေ့လာရန်သင်အတွက်အလွန်ခဲယဉ်းလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရအာမခံထားသည်။ ၎င်းသည်အလွန်ရိုးရှင်းပြီးရှင်းလင်းသော၊ ရှုပ်ထွေးသောနမူနာများဖြင့်ရိုးရှင်းသောဖြေရှင်းနည်းများဖြစ်သည်။
ငါအကြံပြုသောအပိုအကူအညီတစ်ခုမှာသင်သင်ယူလေ့လာရေးလမ်းကြောင်းကိုအသုံးပြုခြင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ဥပမာအားဖြင့် Linux တွင်ပရိုဂရမ်ရေးရန်သင်ယူလိုသူများအတွက်အကြံပြုလိုသည်။
Platzi သည်ကွဲပြားသောနယ်ပယ်များမှသင်တန်းများကိုဆက်တိုက်ဖွဲ့သော Career အစီအစဉ်ကိုထိန်းသိမ်းထားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်မတူကွဲပြားသောဗဟုသုတများကိုရရှိခြင်းဖြင့်၎င်းနယ်ပယ်ရှိအထူးကျွမ်းကျင်သူတစ် ဦး အဖြစ်ကျွန်ုပ်တို့ကိုစဉ်းစားရန်ခွင့်ပြုသည်။ ဥပမာအားဖြင့်သင်ရှိရမည်ဖြစ်သောဆာဗာအုပ်ချုပ်ရေးနှင့် DevOps တို့၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းကိုအောင်မြင်ရန် Terminal နှင့် command line သင်တန်းများအတွက်နိဒါန်း၊ Linux Server အုပ်ချုပ်ရေးသင်တန်း၊ DevOps ပရော်ဖက်ရှင်နယ်သင်တန်း၊ အမေဇုံဝက်ဘ်ဝန်ဆောင်မှုနှင့်အတူသင်တန်းများ၊ Azure laaS သင်တန်း၊ Azure PaaS သင်တန်း၊ DigitalOcean သင်တန်း၊ Now.sh, Docker နှင့်လျှောက်ထားသောဗိသုကာပညာသင်တန်းနှင့် IBM Cloud Fundamentals သင်တန်းအသစ်တို့ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်နယ်ပယ်နှင့်ပတ်သက်ပြီးကျယ်ပြန့ ်၍ ရှုပ်ထွေးသောဗဟုသုတရှိလိမ့်မည်။
PHP နှင့်အတူ Backend ဖှံ့ဖွိုးတိုးတ
Apple ကို Fullstack Developer
ပတ္တမြားတည်ဆောက်ခြင်းနှင့် Backend ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု
ASP.NET နှင့်အတူ Application Development
Big Data နှင့် Data Science
Backend ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို Python တွင်တည်ဆောက်ထားသည်
GO တွင် Backend ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းသို့မဟုတ်သင်တန်းများပြီးစီးပြီးနောက်အတည်ပြုပြီးနောက် Platzi သည်သင့်အားဤကဲ့သို့သောလက်မှတ်ကိုပေးသည် -
ပထမဆုံးအနေနဲ့ platzi ဟာအလွန်အရေးကြီးတဲ့အခမဲ့သင်တန်း ၅ ခုကိုကမ်းလှမ်းထားတယ် Git နှင့် GitHub ပရော်ဖက်ရှင်နယ်သင်တန်း၊ အခြေခံပရိုဂရမ်သင်တန်း၊ အသံမှအသံစျေးကွက်သင်တန်း၊ ကိုယ်ပိုင်အမှတ်တံဆိပ်သင်တန်းနှင့်ဆော့ဝဲအင်ဂျင်နီယာအခြေခံပညာသင်တန်း။
အထက်တွင်ဖော်ပြထားသောသင်တန်းများအပြင် Platzi သည်လစဉ်နှင့်နှစ်စဉ်သင်ကြားမှုအစီအစဉ်များကိုစီစဉ်ပေးပြီးကျွန်ုပ်တို့တွင်အရေးကြီးဆုံးစက်မှုလုပ်ငန်းမှပညာရှင်များမှသင်ကြားပေးသောသင်တန်းများနှင့်အလုပ်အကိုင်အမျိုးမျိုးကိုခံစားနိုင်သည်။ ဒီတစ်ကြိမ်မှာတော့မင်းတို့က beca တစ်လအတွက် ပန်ဇီ သင်အွန်လိုင်းလေ့လာနိုင်သောသင်တန်းများအားလုံးကိုရှာဖွေရန်၊ ဤအရပ်မှရိုးရှင်းစွာသွားပြီးညွှန်ပြသည့်အဆင့်များအတိုင်းလိုက်လုပ်ရန်၊ ထိုနည်းတူစွာကျွန်ုပ်တို့ပူးပေါင်းလာသူများအတွက်လများထပ်မံစုဆောင်းနိုင်လိမ့်မည်။
လူတိုင်းအတွက်သိသာထင်ရှားသော်လည်းကျွန်ုပ်သည်ကိုယ်ပိုင်လေ့လာသင်ကြားခြင်းနှင့်အင်တာနက်ကမ်းလှမ်းသောအမျိုးမျိုးသောနည်းလမ်းများမှသင်ယူခြင်းကိုကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျအကြံပြုပါသည်။ သို့သော် Platzi သည်ကျွန်ုပ်အားအကြိမ်များစွာပြောခဲ့သည့်အကြောင်းကိုလေ့လာရန်အတွက်စနစ်တကျ၊ လက်တွေ့ကျပြီးသာယာသောယန္တရားတစ်ခုဖြစ်သည်။ နည်းပညာအသစ်များကိုသိရန်နှင့်ကျွန်ုပ်၏အတွေးအခေါ်များကိုစနစ်တကျပုံစံပြုရန်တိုင်းတာသည်။ ငါ Platzi အကြောင်းကိုအလေးအနက်ဖော်ပြရမယ့်အရာကပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်ကမင်းရဲ့စီးပွားရေးအတွေးအခေါ်တွေကိုအကောင်အထည်ဖော်ဖို့သင့်ကိုလှုံ့ဆော်ပေးတယ်၊ ဆိုလိုတာကငါတို့ကိုစွန့် ဦး တီထွင်လုပ်ငန်းရှင်တွေဖြစ်ဖို့နဲ့ပရော်ဖက်ရှင်နယ်တိုးတက်အောင်လုပ်ဖို့ဖြစ်တယ်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » အကြံပြုပါသည် » Platzi: နည်းပညာနှင့် ပတ်သက်၍ လေ့လာရန်အဓိပ္ပါယ်ရှိသောပလက်ဖောင်း (My Experience)
Luis Fernando ဒိုမင်ဂူ ဟုသူကပြောသည်
ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအမှတ်တံဆိပ်ကဲ့သို့သောအခမဲ့သင်တန်းအချို့ရှိကြောင်းသင်ပို့စ်တွင်ဖော်ပြထားသည်။ ကောင်းပြီ, အခမဲ့အဘယ်သူမျှမရှိပါတယ်သို့မဟုတ်အနည်းဆုံးငါမမြင်ရ။ အကယ်၍ သင်ဟာကြင်နာမှုကင်းမဲ့ပြီးအခမဲ့သင်တန်းများကိုဘယ်လိုတက်ရမယ်ဆိုတာညွှန်ပြနေတယ်ဆိုရင် (အခမဲ့အခမဲ့မသင်ခင်သင်မည်သည့်ငွေကိုပေးရမယ်ဆိုတာမသေချာဘူး) ။
LUIS FERNANDO DOMINGUEZ သို့ပြန်ပြောပါ
Genesis ကင်မရာ ဟုသူကပြောသည်
Genesis Camacho အားပြန်ပြောပါ
ငါဒီ post ကနေထွက်မယ်ငါဖြည်းဖြည်းသွားပါလိမ့်မယ်
Platzi သည်အွန်လိုင်းပညာရေးတွင်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ငါမှာစာရင်းပေးသွင်းမှုတစ်ထောင်ပေးရမယ်၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲဒီမှာပါ ၀ င်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကအရည်အသွေးမြင့်ပြီး၎င်းရဲ့ပလက်ဖောင်းကအရမ်းကောင်းတယ်။
Tecprog ကမ္ဘာ့ဖလား ဟုသူကပြောသည်
ကောင်းသောဝင်ပေါက်ချစ်လှစွာသောသွား, ဆက်လက်မှာထိပ်မှာသင်တို့ကိုတွေ့မြင်။ 😉
Tecprog World သို့ပြန်သွားပါ
Platzi သင်တန်းများသည်ပြသသူများ၏အရည်အသွေးနိမ့်ခြင်း၊ စီးပွါးရေးကုန်ကျစရိတ်ကိုကိုယ်စားမပြုပါ။
ငါ့အမှု၌, ငါဆန့်ကျင်ဘက်ယုံကြည်, ဘွဲ့ရ 10 သို့မဟုတ် 20 အဆပိုများဖြစ်ကြပြီးတစ်လအတွင်းငါတစ်ပုံစံတည်းနှုန်းများအတွက်အများအပြားတွေ့မြင်နိုင်ကြောင်းစဉ်းစားခြင်း, သင်တန်းများ၏စျေးနှုန်းအရှိဆုံးတိကျမှုဖြစ်ဟန်ရှိသည်။
Anakin SW ဟုသူကပြောသည်
ဘာကြော်ငြာမလဲ၊ ဆောင်းပါးအတွက်ငွေဘယ်လောက်ပေးလဲ။ သူငယ်ချင်းသိပ်ပြတယ်
Anakin SW အားပြန်ပြောပါ
ကောင်းပြီ၊ ဘာမှမရှိဘူး၊ ငါအဲဒီမှာလေ့လာတယ်၊ အကယ်၍ သင်ပညာသင်ဆုလျှောက်ထားမယ်ဆိုရင်သူတို့ကဆောင်းပါးမှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းသူတို့ကကျွန်တော့်ကိုပညာသင်ဆုတစ်လပေးတယ်၊ ဒါပေမယ့်ဒါနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်၊ ဒါကကျွန်တော်တို့ကိုနည်းပညာပတ် ၀ န်းကျင်ကအကြောင်းအရာများစွာကိုလေ့လာခွင့်ပေးခဲ့တယ်။
ငါစိတ်ကူးကိုမျှဝေကြသည်မဟုတ်, ငါ Platzi ဆရာ, ဆရာမသူတို့မသိကြသောကြောင့်, ငါမသိကြောင်းပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူး။ သို့သော်၎င်းတို့တွင်သင်ကြားရန်ဗဟုသုတမရှိပါ။ သူတို့သည်များသောအားဖြင့်အလွန်လက်တွေ့ကျသောနည်းဖြင့်ရှင်းပြတတ်ကြသည်။ ၎င်းတို့သည်သင့်အားဤသို့သောအရာနှင့်ယခုဘာလုပ်ရမည်ကိုပြောပြသည်။ သငျသညျပို။ တည်ဆောက်ရန်ရှိသည်။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ, ငါထင်တယ်, ဥပမာ, သင်မည်သည့်အယူအဆမရှိဘဲပရိုဂရမ်ကိုသင်ယူချင်တယ်ဆိုရင်, စာရွက်စာတမ်းများ, ကိုးကား, etc ဖတ်ရန်အကောင်းဆုံး
PS: ဒီ post ကိုရောင်းလိုက်ပုံရတယ်၊ ငါမှားတယ်လို့မျှော်လင့်တယ်။
Felipe Rodriguez ဟုသူကပြောသည်
ကျနော့်အမြင်မှာတော့ edx ကပိုကောင်းတယ်၊ လက်မှတ်ကပိုစျေးကြီးတယ်၊ သူတို့ကယေဘုယျအားဖြင့်အင်္ဂလိပ်လိုဖြစ်နေတယ်။
ဟိုဆေး Bernardoni ဟုသူကပြောသည်
Jose Bernardoni ကိုပြန်သွားပါ
စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဆောင်းပါး။ စက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်သောသဒ္ဒါ, ဒါပေမယ့်မည်သည့်ကိစ္စတွင်အတွက်စိတ်ဝင်စားဖို့။
"သင် Platzi အခြေခံပရိုဂရမ်သင်တန်းနှင့်ပရိုဂရမ်များကိုလေ့လာရန်မသင်ယူခဲ့ပါကပရိုဂရမ်လေ့လာရန်သင်အတွက်အလွန်ခက်ခဲလိမ့်မည်ဟုပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရအာမခံပါသည်။ ၎င်းသည်အလွန်ရိုးရှင်းပြီးရှင်းလင်းသော၊ ရှုပ်ထွေးသောနမူနာများဖြင့်ရိုးရှင်းသောဖြေရှင်းနည်းများနှင့်အတူပါ။ "
အမှန်မှာ အကယ်၍ သင်သည်တစ်လပေးဆပ်ပြီးထိုလအတွင်းသင်တစ်နှစ်သို့ပြောင်းရန်ဆုံးဖြတ်လျှင်၊ ထိုလအတွက်သင်ပေးသောငွေပမာဏကိုသူတို့သိလိမ့်မည်။
အကယ်၍ သင်သည်နည်းပညာလောကတွင်အစပြုသူတစ် ဦး ဖြစ်ပြီးသင်ဖွံ့ဖြိုးလိုပါကဤစာမျက်နှာသည်ပရိုဂရမ်လေ့လာရန်သင်ယူရန်အလွန်သာလွန်သည် http://www.w3ii.com
စာမျက်နှာကိုယ်တိုင်ကအဆင်ပြေတယ်၊ ​​ငါကအသစ်သောအယူအဆတွေကိုသင်ယူဖို့ကောင်းတဲ့အစပျိုးမှုလို့ထင်တယ်။ ဒီဂရီ / အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ရှိခြင်းသည်ကျွန်ုပ်အတွက်သံသယဖြစ်ဖွယ်ဖြစ်သော်လည်းသင်စာမေးပွဲကိုသင်လိုချင်သမျှအကြိမ်ပေါင်းများစွာဖြေဆိုနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
li လိယ ဟုသူကပြောသည်
ဒီ site ကကောင်းတယ်၊ သင်အခြေခံအကြောင်းတွေသင်ယူတယ်၊ ငါ Go အတွက်ပရိုဂရမ်ဖို့သင်ယူခဲ့တယ် https://apuntes.de/golang ယခုငါ React သင်ယူနေပါတယ်။
Linux မှာဖိုင်တွေကို compress လုပ်ပြီး decompress လုပ်နည်း
Brother Laser Printer ကို linux မှာဘယ်လိုပြုပြင်မလဲ